5 Uru Agile Marketing nwere ihe karịrị Usoro Usoro Omenala | Martech Zone
Ka ndị otu mmepe na-eto ma na-abawanye, ha malitere inwe ọtụtụ nsogbu. Otu nnukwu nzukọ nwere ike wepụta kwa ọnwa na narị otu narị ndị mmepe na-ede ọtụtụ puku koodu nke na-arụ ọrụ nke ọma na mpaghara, mana kpatara isi ọwụwa na nkwekọrịta na ndagide mmesi obi ike. Mgbapu ndị a ga - eduga na ewepụ atụmatụ, igbu oge na wepụta, yana nzukọ na ịgbago usoro iwu iji nwalee ma wepu mgbochi. Usoro agile nyere uzo di iche, iji nmekorita, ndi enyere ike ka ha gbalie nsonaazụ ogologo oge site na usoro sprints.
Atụmatụ azụmaahịa nke taa chọrọ ka ụlọ ọrụ gafee otu njem agile ahịa iji hụ na onye na-arụsi ọrụ ike, usoro ọ bụla nwere ike iru ebumnuche nke nzukọ a. Yabụ otu usoro ahụ nyere aka ịkọwapụta na mepee ngwa ngwa ka etinyere ndị ahịa ahịa. Na ozi infographic a site n'aka ndị mmekọ CMG, ha na-ezo aka Agile Marketing dị ka sistemụ arụmọrụ ọhụrụ maka ire ahịa.
Uru nke Agile Marketing
Na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị - ndị ahịa na-elekwasị anya na ihe ndị ahịa chọrọ karịa nke ime, usoro na usoro nhazi nke na-adigide.
Na-arụ ọrụ n'oge ya - site na mkpụmkpụ okirikiri ma na-ebute ụzọ maka mgbasa ozi na mgbalị, ndị na-ere ahịa nwere ike ịza ngwa ngwa maka mkpa ndị ahịa.
Inweta ndị ziri ezi ìgwè ndị na-emekọ ihe ọnụ na usoro atụmatụ na-eme ka ndị ahịa ziri ezi nwee ozi ziri ezi na oge kwesịrị ekwesị.
Nweta nsonaazụ dị egwu - imebi silos na streamlines usoro ana achi achi na izi ozi nwere ike kachasị cross-channel maka kacha iru na-arụpụta.
Na-achọpụta ma na-emeziwanye - mmeghari usoro na-eme ka ihe mmụta mụtara site na nkwụsị ikpeazụ wee tinye ya na nke ọzọ, na-emeziwanye ahịa ROI.
Nke a bụ mmebi nke ọtụtụ ndị otu azụmaahịa si arụ ọrụ na etu ndị ahịa ahịa si arụ ọrụ.
Tags: aza ajụjụagileahịa agileusoro agilena-arụ ọrụndị ahịa na-elekwasị anyanyochandumoduna-anabataghịmmụta ngwa ngwaihe mgbagwoju anyaOmenala ahiammiri mmiri